Vanaamai, naCarmen Mola
Nguva yemutongo wekupedzisira inosvika kuna Carmen Mola. Achatevera nzira yekubudirira here kana kuti vateveri vake vanozomusiya kana hutatu hwake hwaonekwa? Kana…, pane zvinopesana, ruzha rwese rwakagadzirwa nekwakabva kana kwete kwevanyori vatatu vari kuseri kwepseudonym mu…
Mazhizha Ese Apera, naBeñat Miranda
Ireland inopa zhizha rayo kuGulf Stream inokwanisa kusvika kune iwo maBritish latitudes, senge inoshamisa marine spectrum, ine tembiricha inonaka kupfuura chero imwe dunhu munharaunda. Asi usaite chikanganiso, kuti zhizha reIrish zvakare rine rima rayo pakati pezvinomera zvisingaperi zve…
Murazvo wePhocaea, we Lorenzo Silva
Pane nguva inouya apo hunyori hwemunyori hunoburitswa. kune zvakanaka Lorenzo Silva inomupa kuti aratidze ngano nyowani dzenhoroondo, zvinyorwa, zvinyorwa zvehutsotsi uye mamwe mabasa asingakanganwike ekubatana akadai seazvino zvinyorwa zvemaoko mana naNoemi Trujillo. Asi hazvina kumborwadza kupora...
Iyo saiti, naLuis Montero Manglano
Ndiani akati rudzi rwekunakidzwa rwakafa? Yaingove nyaya yemunyori akaita saLuis Montero aisvika pairi nekubata kwake kusahadzika kuitira kuti tese tifunge zvakare kuti pane zvishoma zvasara zvekuwana munyika ino uye zvekutsvaga. Kune nguva dzose…
Zvese zvinopisa, naJuan Gómez-Jurado
Kutiswededza pedyo nekupisa kunongoerekana kwaitika nekupisa kunoitwa kupisa nguva isati yasvika, izvi "Zvese zvinotsva" naJuan Gómez-Jurado zvinouya kuzopisa huropi hwedu zvakanyanya neimwe yeayo akawanda-mativi marongero. Nekuti zvinoitwa nemunyori uyu kupa protagonism yakagovaniswa kune zvirongwa zvake. Hapana chiri nani pane izvi...
Lazarillo de Tormes, inyaya diki huru
Icho chokwadi chekuti ibhuku risingazivikanwe rinogona kunge rakasunungura munyori waro kubva mukupfupisa wongororo uye censorship yenguva yake. Nekuti rakaburitswa kumashure muna 1554, "Hupenyu hwaLazarillo de Tormes nehupfumi hwake nematambudziko", sekudaidzwa kwazvinoitwa mumusoro waro uzere, aive ...
La Costa de las Piedras, inoveli yezviitiko muMallorca
Iri bhuku rekushanya rinouya kwatiri pasi pezita rekunyepedzera raAlejandro Bosch, pamwe kuzopedzisira nekupenengura iyo nzvimbo yechakavanzika inofashama chirongwa. Nekuti iyo nyaya inotora kubva kune yayo magineti chikamu chechero chiitiko chinoenderana nenhoroondo enigma. Yakaunzwa kuchiitiko ichi mune akapfuma mavara ane…
Peji1 Peji2 ... Peji98 Zvadaro →